Kubva pamaketani ehusungwa kune pfumo rorusununguko - Afrikhepri Fondation
svondo, 11 kubvumbi, 2021
Mufananidzo: Spartacus Series
Kubva pamaketani ehusungwa kusvika kumunondo werusununguko
Un chikepe chinobuda kubva kumahombekombe eAfrica, vari muchikepe, varume vane ganda dema nevakadzi vakaremara semhuka dzemutoro, dzakabatanidzwa necheni kune imwe nzvimbo. Muviri wakafukidzwa nekutuka, une dumbu risina chinhu uye maziso ane haggard, akasungirirwa kubva kumusoro kuenda kune imwe uye achivata muchikepe kuenda rwendo rweAtlantic kuenda kune imwe nyika isingazivikanwi.
Zvadaro, kutengeswa, kutumidzwa semombe, kurasikirwa nekuremekedzwa kose, vakabatwa semhuka.
Vakagurwa kubva kuminda yavo, tsika dzavo, zvavanotenda, vakarasikirwa nenhoroondo yavo, vachiva maseru asina kudzika, ectoplasms isina density, kurarama vakafa vasina mweya, vakadzungaira pamusoro penyika vasina chinangwa chaicho uye vasina kusiya chero zvinyorwa zveminwe.
Ndangariro dzemadzitateguru edu dzakadzimwa kubva kuunganidziro yedu kusaziva uye nhaka yedu yabiwa.
Asi ngetani dzepfungwa dzehusungwa hadzisati dzambodambuka zvechokwadi. Kunge nzou yakadzidziswa kuti irambe yakanamatira kune shrub uye yakave ine simba munhu mukuru pachyderm haizomboedza kupunyuka, muranda akasunungurwa, achiona ngetani dzakasunungurwa nemudzvinyiriri wanezuro haazombotsvaga rusununguko rwake rwechokwadi. Akave akagadzikwa zvakakwana natenzi wake zvekuti kana zvisungo zvake zvadonha, anoramba akavharirwa mukamuri yakatokura yehusungwa: yekunyepedzera uye kugadzirisa.
Rusununguko harugone kupihwa asi runowanikwa mushure menguva yakareba kurwa kwakaomarara.
Kungofanana negladiator anotora rusununguko rwake nekushinga kufa munhandare, muranda anofanira kusimuka akazvishongedza neruzivo.
Saka ndezvekuti kubva mukusava nebasa anozove munhu anoziva uye kubva kumuranda akasunungurwa anozopedzisira asununguka.
Guta zana eAfrica rakaparadzwa nemaEurope: Nei pasina nhoroondo dzezvivakwa mu Africa
Iyo Mbwa - Kfungwa yemunhu uye chisikwa ngano
Kumadokero kudzokazve kweAfrica